စာဖက်သူများသူများနှင် Admin သိ၇ှိ၇န် - .::just for share::.
Home » »Unlabelled » စာဖက်သူများသူများနှင် Admin သိ၇ှိ၇န်
စာဖက်သူများသူများနှင် Admin သိ၇ှိ၇န်
http://mr-phoenix.blogspot.com/ ၇ဲ.ဆိုက် ကို မိတ်ဆွေတို.အောက်လင်.များမှ
တိုက်၇ိုက်ဝင်ေ၇ာက် နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်
7နှစ် အတွင်း အပေါ်ကလင်.များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
ကိုဖြိုးေ၇ com တို. net တို.နဲ တပ်ပေးဖို. ကိုယ်ကြိုးစားပါသေးတယ် ညီဘလော. Erro တွေ တော်တော်ပြနေလို. tk နဲပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ် ညီဘလော.ကErroတွေကို ဖျက်ဖိုကိုယ်
အင်္ဂလိပ်နည်းပညာဆိုက်မှာ ၇ှာဖွေကြည်အုံးမယ် နည်းလမ်းတွေတာနဲ. com .တို.net
Posted by ko ye
ကို ဖြိုး November 21, 2013 at 7:36 AM